Dhageyso: Gabar Si iskeed Ah Utagtay Maxkmad Islaami Ah Oo Xad Zina Ah Looga Fuliyay Deegaanka Bariire Ee Sh/Hoose.
Friday November 03, 2017 - 19:41:22 in Wararka by Super Admin
Maxkamadda ku dhaqanka Shareecada Islaamka wilaayada Sh/Hoose ayaa xukun Xad ah ku fulisay Haweenay horay uzinaysatay iyadoo aan horay guur usoo marin.
Fagaara weyn oo ku yaal deegaanka Bariire waxaa isugusoo baxay Boqolaal qof kuwaas oo daawanayay xukun Xad ah oo lagu fulinayay Bahja Saalax Ibraahim oo si iskeed ah uga timid degmada Afgooye islamarkaana Maxkamadda islaamiga ah ka codsatay in xukunkaasi laga oofiyo.
Bahjo iyo Saalax iyo Cadnaan Cumar ismaaciil ayaa horay isaga Zinaystay waxayna isgeeyeen Maxkamadda iyadoo aan cidna soo qaban sida uu sheegay qaadiga maxkamadda islaamiga ah, maxkamadda ayaa horay Cadanaan uga oofisay xadka waxaana lagu dhuftay 100 Garbaash madaama uusan hora guur usoo marin balse Bahjdo oo xilligaas umul aheyd islamarkaana nuujinaysa Canug yar ayay maxkamaddu fasaxday illaa ay umusha kasoo baxdo iyadoo loo turayo ilmaha yar ee zinada ku dhashay.
Qaaddiga Maxkamadda islaamiga ah ayaa sheegay in 100 garbaash lagu dhuftay Bahja Saalax iyo Cadnaan oo muddo sedax bilood ah isaga Zinaysanayay guri kuyaal degmada Afgooye.
Dad badan ayaa la yaabay sida gabdhan shareeca doonka ah ay ugu dhiiratay in ay usafarto Bariire kanasoo tagto Afgooye oo AMISOM maamusho kadibna ay dalbato in xadkan laga oofiyo, waana tallaab muujinaysa in shacabka soomaaliyeed shareeca doon yihiin balse ay udiidanyihiin kuwa dabada ku wata ciidamada shisheeye.
Waa xukunkii ugu horreeyay ee islaami ah oo ka dhaca deegaanka Bariire ee Sh/Hoose oo bartamihii bishii October 2017 ay isaga firxadeen Ciidamo Mareykanku soo tababaray kadib weerarro isdaba joog ah oo uga imaanayay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
Halkan ka degso Xukunka maxkamadda islaamiga ah ridday MP3